मेथी खानुका फाइदा के–के हुन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मेथी खानुका फाइदा के–के हुन् ?
पुस १६ गते, २०७६ - ११:४१
काठमाडौं। मेथीको दानामा अत्यधिक पौष्टिक तत्व पाइन्छ। यसलाई राति भिजाएर बिहान खाली पेटमा मज्जाले चपाएर खाँदा र यसको पानी पनि पिउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई फाइदा पुर्‍याउने गर्दछ।
के हुन् मेथीका फाइदा ?
भारतको उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका स्वस्थ वृत्त विभागका एचओडी डा. अवधेश मिश्राका अनुसार मेथीले भोक बढाउँछ र यसको नियमित सेवनले पित्त, कफ र ज्वारोको समस्यालाई टाढा राख्छ।
(१) मेथी दानामा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, सोडियम, जिंक, फस्फरोस, फोलिक एसिडजस्ता मिनरल्सका साथै भिटामिन ए, बी र सी पनि पाइन्छन्। यसका साथै, यसमा भरपूर मात्रामा फाइबर्स, प्रोटिन, स्टार्च, सुगर, फस्फरोस एसिडजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ।
(२) मेथी दानाको दैनिक जसो प्रयोग गर्दा बाँझोपनजस्ता समस्या हुँदैन। स्पर्म काउन्ट र क्वालिटी निकै राम्रो हुन्छ। मेथी दानामा शरिरको टक्सिन बाहिर निकाल्ने क्षमता हुन्छ जसले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यो नियमित रुपमा खाँदा ग्याष्ट्रिकको समस्याबाट बच्न सकिन्छ। जलन र एसिडिटी पनि हुनबाट जोगाउँछ।
(३) मेथीका दानामा पाइने सोलुबल फाइबर्स ब्लड सुगरलाई नियन्त्रणमा राखेर मधुमेहको खतरा घटाउने गर्दछ। यसमा पाइने गेलाक्टोमेनन र पोटासियमले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ र हृदयघातबाट बचाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। भिजाइएको मेथी दानाले पाचन क्रियालाई बलियो बनाउँछ। कब्जियतसहित पेटका विभिन्न समस्यालाई टाढै राख्छ।
(४) मेथीका दानाले शरिरको टक्सिन बाहिर निकालेर छालालाई स्वस्थ बनाउँछ। चायाँ, पोतो, डण्डीफोरबाट बचाउने गर्दछ। बिहान दैनिक भिजाइएको मेथी दाना खाँदा कपाल चाँडै सेतो हुँदैन। झर्न पनि रोकिन्छ। यसले पाचन क्रियालाई बलियो बनाएर कब्जियत र एसिडिटीलाई टाढै राख्छ। यसले पायल्सको समस्याबाट पनि राहत प्रदान गर्छ।
(५) मेथीका दानाले धेरै पिसाब लाग्नु वा पिसाबको संक्रमणजस्तो समस्यालाई टाढा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्छ। यसले पिसाबलाई शुद्द राख्नुका साथै विभिन्न संक्रमणहरुबाट बचाउँछ। त्यसैले मेथी स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी मानिन्छ।
पुस १६ गते, २०७६ - ११:४१ मा प्रकाशित